Fikarakarana fiara any Irlandy - Torolalana fototra
Fiaramanidina iray any Irlandy
Tadiavo ireo antsipiriany ao amin'ny Irish Rental Cars
Ny fiara fiara any Irlandy mandritra ny herinandro na roa dia tsy olana (raha tsy te- hitondra ny fiaran-tenanao manokana ianao ho mpitsidika any UK na Continental Europe). Misaotra ny Internet dia azo atao amin'ny fampiononana ao an-tranonao, ary ao anatin'ny minitra vitsy. Nefa misy ny mety ho fandrika rehefa mandoa hofaina amin'ny vakansy irlandana. Mety ho sarotra ny mahazo ny fiara mety hahazo anao.
Ohatra, ny fiheveran'ny "fiara" dia mety ho samy hafa tanteraka amin'ny Amerika Avaratra sy Eoropa.
Raha tena zava-dehibe tokoa any Grande-Bretagne sy Etazonia, ny Eoropeana dia mitady ny toekarena solika ary mampiakatra ny toeram-piantsenan'ny fiara. Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy amin'ny fisafidianana ny fiara mety amin'ny trano. Aza mifikitra amin'ny ultra-mini ho an'ny fianakaviana dimy.
Fiovana - Tsy automatique automatique
Ny zavatra voalohany tokony hoeritreretina dia ny fifindrana. Raha ny ankamaroan'ny fiara mividy any Amerika Avaratra dia ho ampy fitaovana elektronika, ny fifandraisana amin'ny tanana dia ny fitsipika napetraka any Eorôpa. Ankoatra izany, ny fiovan'ny fihodinana dia eo ankavian'ny mpamily. Raha toa ka tsy mahazatra amin'ny fampitaovana ny fitaovana dia azo antoka fa mangataka automatique. Miomàna hiasa maimaim-poana any amin'ireo sampan-draharaha fampandehanana. Ary tsarovy fa ireo "exotic" automatique transmissions afaka mivarotra haingana, dia boky aloha.
Vidin'ny solika - Aza manahy
Araka ny voalaza teo aloha, ireo mpamily eoropeanina dia voasarika amin'ny fahombiazan'ny solika. Ny fijerena ny vidin'ny solika any Irlandy, avelao any Irlandy Avaratra, hanazava izany fanangonam-bola izany ho an'ireo mpitsidika amerikana - dia manantena ny handoa indroa ny vidiny efa nampiasainao.
Fa ny fahombiazan'ny fiara mpitondra fiara dia tokony ho lehibe tokoa, na dia ho an'ireo fiara lehibe aza. Izay farany dia mitondra fiara any Irlandy tsy dia lafo loatra ny mandeha fiaramanidina. Raha tsy manadino ny mandoa ny saram-piaramanidina maimaim-poana amin'ny M50 ianao - tsy misy olana sy fandoavana ny làlana hafa.
Toerana iraisam-pirenena - Fitahiana kely
Ny ankamaroan'ny fiara mivezivezena dia seramika Eoropeana na japoney, natsangana ho an'ny toe-java-maneno sy ny lalana tsy dia lavitra loatra.
Indrindra ny sokajy ambany ("Sub-Compact" sy "Compact") dia karazana "fiaran'ny tanàna" ho an'ny mpampiasa indraindray. Na ny "Mid-Size" any Irlandy aza dia nomena anarana hoe "Compact" any Etazonia. Noho izany dia manantena fepetra misimisy kokoa ary misafidy fiara lehibe kokoa raha mandeha lavitra lavitra.
Seats and Legroom - Miomana amin'ny zava-mahagaga
Vitsy kely ny fiara ary ny Eoropeana dia ampiasaina amin'izy ireo. Io fitambarana io dia mitondra mankany amin'ny fanombanana amin'ny tranokalam-panofana fiara. Ny mpamatsy iraisam-pirenena iray dia hanolotra fiara mitovy amin'ny fiara miaraka amin'ny fanatsarana tanteraka ny kalitao. Ao amin'ny tranonkalan'ny US dia nomena olon-dehibe roa sy zanaka roa, ny tranonkala Irlandy dia nomena olon-dehibe dimy. Raha lehibe kokoa noho ny Eoropeanina midadasika ianao (5 ft 7, 165 litatra), dia mila fiara lehibe kokoa. Ny orinasan-drivotra sasantsasany dia hilaza aminao ny fiara amerikana mitovy aminao mba hanampy anao hisafidy.
Ny Trunk - Iza Trunk?
Ny toerana an-dakilasy amin'ny fiara Eoropeana sy Japoney dia mety henjana. Ny "Sub-Compact" sy ny "Compact" dia tsy ho azo avy amin'ny karazana hatsikana izay tsy misy trondro tena izy ary faritra iray mihamaloka ao ambadika. Ny fahazoana olon-dehibe efatra sy ny entany mankany amin'ny "Sub-Compact" dia saika tsy azo tanterahana. Raha toa ianao mikasa ny handray ny entana feno entana dia mandehana ho an'ny "Mid-Size" farafaharatsiny.
Aza mieritreritra ny hamela ny entanao handehanana rehefa mitsidika, izany dia hahasarika ny saina. Ary, raha ny tena marina, ny vondrona dia antsoina hoe boot eto ...
Extras - tsy mila azy ireo ianao
Rehefa mijery ireo fiara mividy Eoropeana ianao dia mety mahita fa ny rafitry ny rivotra na ny fitsangatsanganan-tsambo dia tsy voatery ho tafiditra ao anatin'io fepetra io. Tsy hahomby ianao. Raha toa ka tsara ny fahandroana mandritra ny fotoana fohy mandritra ny vanim-potoanan'ny Irlandey fohy, dia tsy azo ampiasaina velively ny fitsaboana. Tsara kokoa ny mitady kodiarana tsara - indrindra rehefa mandeha amin'ny ririnina na amin'ny orana sy ny tondra-drano .
Alefaso ny Find Platform Search
Sarobidy be ny sehatra fampitahana vidin-javatra - maninona no tsy manatsara ny karoka fitrandrahana fiarakodia?
Maka ny sambo mankany Irlandy
Hevi-diso sy tsy fitoviana momba an'i Saint Patrick
Zavatra tsy tokony hialanao any Irlanda raha tsy
Ny tari-dalana manan-danja ho an'ny Castle Dunguaire, Irlandy
Ny vidin'ny "Irish Grocery"
Valan-javaboarin'i Enchanted Island
Torolàlana iray hitsidihana an'i Reptilia
Afrika Travel Gift Ideas
Eoropa Atsinanana amin'ny volana Aogositra
Fialam-boly mahaliana indrindra ao Salt Lake City
Famerenana ny hazo krismasy ao Vancouver
Zavatra tena mahafinaritra atao any Missoula, MT
Jiona Gay Pride Calendar 2017
Ireo rehetra momba ny rano puppet Vietnamiana
Taratasy ho an'ny pétition amin'ny St. Paul
Zavatra atao atao any Disneyland: Ny Top 11 tianao